တနိုင်းဒေသ တိုက်ပွဲများကြောင့် ပိတ်မိနေသော ပြည်သူ ၃၃ဝဝ ခန့် နေရပ် အသီးသီးသို့ ပြန်လည်ထွက်ခ? - Yangon Media Group
တနိုင်းဒေသ တိုက်ပွဲများကြောင့် ပိတ်မိနေသော ပြည်သူ ၃၃ဝဝ ခန့် နေရပ် အသီးသီးသို့ ပြန်လည်ထွက်ခ?
တနိုင်း ဒေသတိုက်ပွဲများကြောင့် ပိတ်မိ နေသောပြည်သူ ၃၃ဝဝ ခန့် နေရပ်အသီးသီးသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည် နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးက ၎င်း၏တရားဝင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှထုတ် ပြန်ခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့ နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှု ကြောင့် နေရပ်ပြန်သူများအားလူ မှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားခရိုင် တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နီးစပ်ရာ မှော်များနှင့် နန့်ကွမ်းချောင်း ပေါက်ဝတို့တွင် ပိတ်မိနေခဲ့သည့် ပြည်သူ ၃၃ဝဝ ခန့်ကိုတပ်မတော်၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီးတနိုင်းမြို့ ဆင်မ်ဆာ့ရပ်ကွက်ရှိ ယာယီအားကစားကွင်းစုရပ်သို့ ပို့ဆောင်လျက်ရှိပြီး တိမ်းရှောင် ပြည်သူများအနက် ဒေသခံပြည်သူများမှာ ၎င်းတို့၏နေရပ်များ သို့အသီးသီးပြန်လည်ထွက်ခဲ့ ကြောင်း ရပ်ဝေးမှပြည်သူများကို မူလနေရပ်ဒေသများသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်မှုတွင် ဖော်ပြသည်။
ရပ်ဝေးဒေသများသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှုအခြေအနေ မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် မြစ် ကြီးနား၊ မန္တလေး၊ ရွှေဘို၊ မိုးကုတ်၊ ပလက်ဝမြို့များမှ ပြည်သူ ၄၃ ဦး၊ ပလက်ဝ၊ အရာတော်၊ မိုးကုတ်၊ ဒီပဲယင်း၊ ဟိုပင်၊ တံတားဦး၊ မြေပုံ၊ ဖရူဆို၊ ဝန်းသိုမှ ပြည်သူ ၃၁ ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင်လည်း ကောင်း၊ ဒီပဲယင်း၊ နတ်မော်၊ မြောက်ဦးမှပြည်သူ ခုနစ်ဦးကို ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ ဝါးခယ်မ၊ ခင်ဦး၊ တောင်ငူမြို့မှ ပြည်သူ ကိုးဦးကိုဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တို့တွင် အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊ စားစရိတ်နှင့်ခရီးစရိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ မြစ် ကြီးနား-မန္တလေးအမြန်ရထား ပေါ်သို့ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းဒေသတွင် တပ်မတော်နှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီး KIA အနေဖြင့် မြစ်ကြီးနား၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ ပူတာအိုလမ်းပိုင်းကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မိုးကောင်းမြို့နယ် အတွင်းတပ်ဌာနချုပ်များနှင့် တပ်မတော်စခန်းများအား လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့် လာရောက်နှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ထားသည်။ လက်ရှိ တနိုင်းဒေသတွင် ပိတ်မိနေသည့်ပြည်သူ ၄ဝဝ မှ ၅ဝဝ ခန့်အထိရှိနေသေးကြောင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ကျန်းမာ ရေးစိုးရိမ်ရသည့်အနေအထား ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကိုကယ်ထုတ် နိုင်ရေးကြိုးစားနေကြောင်း တနိုင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် (၂)မှ ဦးဇော်ဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်က ပြောသည်။
”အခုအနေအထားအထိက ပြည်သူ ၃ဝဝဝ ကျော်ကို တပ်မတော်က စိစစ်ကယ်ထုတ်ပေးထားပြီး လုပ်ငန်းရှင်တွေကတနိုင်းက နေနီးစပ်ရာ ဒေသခံတွေကိုကား တွေကူညီပေးပြီး ပို့ဆောင်မှုပြု လုပ်ပါတယ်။ ဒေသနဲ့ဌာနဆိုင်ရာ တွေကပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးပါတယ်။ ရပ်ဝေးကသူတွေကိုတော့ လူကယ်ပြန်ကစီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်အခြေအနေကတော့ ပြည်သူ ၄ဝဝ၊ ၅ဝဝလောက်ကို ကယ်ထုတ်ဖို့ကျန်နေသေးတယ်။အစုအဖွဲ့လိုက်တိုက်ပွဲရှောင်နေ ကြတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဆို တော့။ ရာသီဥတုအအေးဒဏ်ကို တော်တော်ခံနေရတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုး ရိမ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အစာ ရေစာကတော့ ထောက်ပံ့မှုအချို့ ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ အားလုံးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း နေကြပါတယ်”ဟု ပြည်နယ်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဝင်းကဆိုသည်။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန် ကြီးဌာနအနေဖြင့် တိုက်ပွဲရှောင် နေရပ်ပြန်ပြည်သူများအတွက် ထောက်ပံ့မှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ကချင်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဒေါက်တာ အေးမောင်နှင့် စာရေးဆရာ ဝေဟင်အောင်တို့အား လွှတ်ပေးရေးနှင့် မြောက်ဦးကိစ္စ အမှုမှန်ပေါ်
သင်္ဘောသား သုံးဦး နစ်နာကြေးပြန်ရရေး တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို တရားစွဲမည်
မြိတ်ဒေသ ပုစွန်ကန်တစ်ကန်လျှင် တစ်နှစ်သုံးကြိမ်မွေးမြူခြင်းမှ အမြတ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဝဝဝ?
ဆင်သတ် မုဆိုးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းပေးသူများကို ဆုကြေးငွေ ကျပ်သိန်း သုံးဆယ်ပေးမည်
စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကို ဂါရ၀ပြုလို့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦး?
မဒေါက်မြို့၌ ရပ်ကွက်အနိမ့်ပိုင်းနေရာများ စစ်တောင်းမြစ်ရေဝင်ရောက်လျက်ရှိ
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းကောင်းများအား ထောက်ခံပွဲ ရန်ကုန်တွင်ပြုလုပ်